Guardiola oo doonaya Kabtanka Kooxda ‘Kompany’ inuu kordhiyo qandaraaskiisa – Walaal24 Newss
Guardiola oo doonaya Kabtanka Kooxda ‘Kompany’ inuu kordhiyo qandaraaskiisa
January 9, 2019	0	By walaal24
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa doonaya Kabtanka Kooxda Vincent Kompany si uu u kordhiyo qandaraaskiisa, kaasoo dhacaya dhamaadka xilli ciyaareedka.
Kompany ayaa 338 kulan u saftay City tan iyo markii uu yimid 2008 waxaana uu kabtan u ahaa kooxda tan iyo 2011.
32-sano jirkaan ayaa ah kabtanka ugu guulaha badan taariikhda kooxda, isagoo hogaanka u dhiibay seddex horyaal oo Premier League, seddex League Cup iyo FA Cup.
Isagoo weydiiyay hadii uu doonayo Kompany inuu sii joogo City, Guardiola ayaa yiri: “Waan jeclaan lahaa, Waa kabtankeena, 11 sano ayuu ku qaatay”.
“Waxaan aragnay labadii kulan ee ugu dambeysay, dhibaatadiisa ayaa ah inuu kaliya ka ciyaari karo midkood [Kompany ayaa ku jiray line-upka kulankii Liverpool isbuucii hore laakiin ka dibna FA Cup ayaa ka badisay Rotherham].
Guardiola wuxuu maamulay daafacyo badan oo caalami ah inta lagu jiro xirfadiisa ciyaareed ee Barcelona iyo Bayern Munich – oo ay ku jiraan Carlos Puyol, Gerard Pique iyo Philipp Lahm – laakiin wuxuu ku qiimeynayaa Kompany inta ugu fiican.
“Kaliya (Aymeric) Laporte ayaa heysta cagta bidix ka fiican Vincent,” Guardiola ayaa hadalkiisa raaciyay.
“Difaac kasta oo dhexe waa tayo laakiin shaki la’aan Vincent waa mid gaar ah”.
“Nasiib daro, guuleysiga, waa mid cajiib ah, waa mid ka mid ah daafacyada dhexe ee ugu fiican ee aan abid arko.”
City ayaa lugta hore ee semi-finalka Carabao Cup kula ciyaareysa garoonkeeda Arbacada habeenkii Arbacada.
Guardiola ayaa sheegay in Kevin De Bruyne iyo Ilkay Gundogan ay ciyaari doonaan, maadaama ay isku dayayaan inay dib u helaan jimicsiga ciyaarta ka dib dhaawacyada.
Nicolas Otamendi iyo Kyle Walker – kuwaas oo lahaa wakhti yar oo cayaaro todobaadyadii la soo dhaafay – ayaa sidoo kale la filayaa inay bilaabaan.
City weli wali waxay ku howlan tahay afarta kooxood ee tartameysa, halka kooxda horyaalka kula xafiiltameysa ee Liverpool ay leedahay kaliya Premier League iyo Champions League.
Laakiin Guardiola ayaa aaminsan in kooxdiisu ay ku dagaalami karto afar lugood, isagoo yiri: “Haddii qof walba uu taam yahay oo uusan dhaawacmin, waan ku adkeysan karnaa.”Dhibaatadu waa, haddii aad haysato 10 ciyaaryahan oo dhaawac ah, waa wax aan macquul ahayn.
“Hada qof walba ayaa ku lug leh, ciyaartoyda ma yaqaaniin cida la ciyaari doonta Burton, ka dib afar maalmood ka dib, waxaan heysanaa finalka kale ee Wolves.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan ku jirno afarta kooxood ee ugu macquulsan, markii Wigan ay naga dhigtay FA Cup xilli ciyaareedkii hore, waan murugooday.
“Waxaan koobab ku qaadaa koobabka, tusaale ahaan Rotherham, tusaale ahaan, waxaan la ciyaarnay sagaal ciyaaryahan oo aan ka horimaanin Liverpool shalay [Khamiistii hore] sagaalna waa xul wanaagsan.
“Waxa ay u fiicaneyd qaab ciyaareedka Kevin (De Bruyne), Ilkay Gundogan, Nico (Otamendi), Kyle (Walker) oo qumman.”
Dowladda Yugaabdha oo gar-gaar ugu deeqday Dadka ay saamaysay fatahaadda Webiga Shabeelle
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hogaamiyaya oo gaaray Dalka Ethiopia
Bam gacmeed caawa lagu weeraray Xaruunta Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo oo u ambabaxay Dalka Qatar
Madaxweyne Erdogan oo sheegay ineysan laabandoonin heshiiska Russia ee ganntaalada S-400
Guddoomiyaha Aqalka sare ee Dalka oo ka qeyb galay shir ka furmay magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
Madaxweyne Farmaajo oo ka qeyb galaya caleemo saarka ayaa u hambalyeyay Madaxweynaha Koonfur Afrika
Hey’ada FBI Dalka Mareykanka oo Abaal marin ku doonsiisay Gabar Soomali Mareykan ah
Daawo: Madaxweyne Dani oo daah furay Imtixaanka Shahaadiga Dugsiga Dhexe iyo Sare ee Puntland